Isamsung iyarhoxisa umcimbi weGlass Fold eSpain | I-Androidsis
Kwiveki ephelile iingxaki zifunyenwe kwiscreen seGold Fold. Iindaba ezimbi ngeSamsung, njengoko isiphelo esiphezulu silungiselela fika kwezi veki ngokusemthethweni kwintengiso. Ukongeza, ukuza kuthi ga ngoku wayengu-a impumelelo yokubhukisha kwintengiso. Ngenxa yezi ngxaki, ifemi yenza isigqibo rhoxisa umcimbi eTshayina.
Isamsung ngoku iphanda le micimbi yesikrini. Kodwa ixesha lifutshane, kuba ukumiliselwa kwayo kucwangciselwe lo Lwesihlanu e-United States. Okwangoku, uphawu luyakuqinisekisa oko Umnyhadala ababecwangcise ukwazisa ngeGolden Fold eSpain urhoxisiwe.
IGreen Fold ibinomnyhadala ocwangciselwe uMeyi 3 eSpain. Lo ngumhla wale fowuni iqala eYurophu ngokusemthethweni. Ukongeza, kwangalo lwangoLwesihlanu, nge-Epreli 26, kucingelwa ukuba ixesha lokugcina lomnxeba liya kuvulwa ngokusesikweni kwimakethi yaseYurophu.
Okwangoku, i-Samsung sele ikhuphe ingxelo apho Kuqinisekisiwe ukuba umcimbi uthe warhoxiswa. Okwangoku abakhange bathethe nto malunga nokulibaziseka komhla wokumiliselwa kwefowuni. Nangona kubonakala ngathi lo ngumcimbi weeyure, ngenxa yezi ngxaki ngesixhobo.
Ngoko ke, ukumiliselwa kweGolden Fold isemoyeni ngoku. Ukulinda isiqinisekiso esongezelelweyo esivela kwinkampani yaseKorea. Kodwa kuyacaca ukuba imeko inzima kule femu, ke ngekhe kumangalise ukuba kungade kubekho ukulibaziseka kulwaziso olwenziweyo.
Akukho datha yokuba siza kuba nini neendaba ezithile malunga noku. Isamsung ikhankanya kuphela umsitho kunye nokucinywa kwawo. Kodwa yintoni abasebenzisi abanethemba lokwazi ukuba ekugqibeleni kuyakubakho ukulibaziseka ekusungulweni kwale Galaxy Fold. Okunokwenzeka kukuba, kunjalo, kodwa kuya kufuneka silinde inkampani ukuba isiqinisekise ngayo. Ucinga ukuba kuya kwenzeka ntoni emnxebeni?
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Isamsung irhoxisa umcimbi weGlass Fold eSpain